चीनले बनायो भारतीय सिमारक्षाकाे लागि मानवरहित हेलिकोप्टर, भारत त्रसित (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > चीनले बनायो भारतीय सिमारक्षाकाे लागि मानवरहित हेलिकोप्टर, भारत त्रसित (भिडियो सहित)
admin May 25, 2020 अन्तराष्ट्रिय, प्रविधि 0
भारत र चीनबीचमा पछिल्ला दिनमा चलिरहेको सीमा विवादमा फेरि अर्को विषय चर्चामा आएको छ, त्यो हो चिनियाँ मानवरहित हेलिकप्टर । यो हेलिकप्टरले भारतीय सीमा क्षेत्रको सुक्ष्म निगरानी गर्ने चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
चीनले बनाएको यो मानवरहित हेलिकप्टरको नाम AR500C हो । यो चीनको सरकारी कम्पनी एभियसन इन्डष्ट्री कर्पोरेशन अफ चाइनाले बनाएको हो । कम्पनीले चीनको पूर्वी प्रान्त जियाङसीको पोयाङमा पहिलो पटक उडाइएको छ ।
China’s latest unmanned helicopter, capable of conducting reconnaissance, communication relay, electronic disruption and fire strike missions in plateaus along China’s southwestern borders with #India, recently made its maiden flight. https://t.co/gK2I3RSDVT pic.twitter.com/X9jGWYwneo
— Global Times (@globaltimesnews) May 24, 2020
परीक्षणका क्रममा राम्रो काम गरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रको निगरानी मात्र नभएर युद्धमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसले दुश्मनलाई तार्गेट गर्ने र परमाणु तथा रासायनिक लिकेटको पनि यसले जानकारी दिनेछ ।
परीक्षणको भिडियो हेर्नु यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यो हेलिकप्टर अधिकतम ६ हजार ७ सय मिटर अर्थात २१ हजार ९ सय ८१ फिटको उचाइसम्म उडान गर्छ । यसको गति प्रतिघन्टा १ सय ७० किलोमिटर रहेको छ । यो हेलिकप्टरको तौल ५ सय किलो रहेको छ ।
China PLA’s A.i. powered Unmanned Auto Helicopter is designed for high attitude Tibet-Himalayan operations.MTOW 500kg,takeoff altitude 5000m, ceiling:6700m(21981ft),speed:170kmph,multiple Payload configuration @CDSBipinRawat @adgpi @indiannavy @IAF_MCC @rajnathsingh @narendramodi pic.twitter.com/ubKEUoz7aH
— India Research Centre (@IndiaResearchC1) May 24, 2020
हेलिकप्टर बनाउने वैज्ञानिक फेङ्ग योङ होङले यो पुरै डिजिटल भएको बताएका छन् । यसले आफै उडान गर्ने र आफै ल्याण्डिङ गर्नेछ । यो सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्ने पहिलो मानवरहित हेलिकप्टर हो । उनले यो हेलिकप्टरमा अत्याधुनिक इन्जिन लागेको जानकारी दिएका छन् ।
चिनियाँ रक्षा विशेषज्ञ फु क्विन साओले सीमा क्षेत्रमा यो मानवरहित हेलिकप्टर राम्रोसँग उडान भर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । उनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रको निगरानी राम्रोसँग गर्ने बताए । अब लद्दाख क्षेत्रमा पनि यो हेलिकप्टरको प्रयोग हुनेछ ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जलीः भारतमा फेरि १६ बर्षिया टिकटक स्टार सियाले गरिन देहत्याग !
लद्दाक घटना पछि चीनलाई मोदीले दिए चे’ताव’नी, ‘हाम्रो धैर्यको परिक्षा कसैले नलिओस्’